नेपाली आत्मिक सवलता र सार्वभाैमसत्ता
नेपाल भारत सिमा विवाद निक्कै लामाे छ । यही विवादलाई देखाएर नेपालमा देशभक्तिकाे सञ्चार गराउने काेशिश ५५/६० बर्ष यता हुँदै आएकाे छ । भारतसँगकाे सिमा विवादमा हामी खुब भावुक भइहाल्छाैं र अहिल्यै हतियार बाेकेर युद्धमा कुदिहालाैंला झैं गर्छाैं । सरकारमा जाे भएपनि सिमानामा सेना पठाएर बन्दुक पड्काइहालाेस् भन्छाैं । क्षेप्यास्त्र हानिहालाेस् भन्छाैं ।
हामी यति भावुक भइरहँदा हाम्राे धरातलीय यथार्थता र आत्मिक सवलता के कति छ ? भन्ने विषय पुरै विर्सन्छाैं । मलाई के लाग्छ भने एउटा देश कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा त्यहाँका नागरिकमा रहेकाे आत्मिक सवलताले मुख्य काम गर्छ । इतिहासमा प्रमाणित भइसकेकाे छ कि मानिसकाे मानसिक सशक्तता हतियार भन्दा शक्तिशाली हुन्छ । भियतनाम, इजरायल, कस्मिर सुने देखेका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनता बचाउन हामी साँच्चै कति सक्षम छाैं ? नागरिकसँग त्याे आत्मबल छ कि छैन त ? त्याे गम्भिर रूपले साेँचनीय विषय छ । नागरिककाे आत्मवल नै राज्यकाे शक्ति हाे । स्वाभिमानी वीर नागरिकहरू नभएकाे देश र राज्य हुतिहारा हुन्छ । याे सामुन्नेमा प्रमाणित कुरा हुन् । वीरता र मुर्खता फरक कुरा हुन् । हामी नेपालीहरू मुर्खता देखाएर वीर हुन खाेजिरहेका छाैं ।
नेपालीले २०४ बर्ष भयाे आफ्नाे देशकाे माटाे बचाउन युद्ध नलडेकाे । त्यस यता हामी सधैं परायका लागि वीर भइ आएका छाैं । ठूला ठूला युद्ध लडेका छाैं त अरूकै माटाेका लागि । म भाडाका सिपाही त भन्दिन तर खेताला याेद्धा अवश्य छाैं दुई शताब्द्धी भन्दा लामाे समय देखि । देशकाे माटाे रक्षाका निम्ति हाेइन, खेतालाे गएकाे देशका लागि हजाराैं घनलिटर रगत बगाएका छाैं । लाखाैं ज्यानकाे बलि चढाएका छाैं । उति नै संख्यामा विधवा र अनेकाैं लाख टुहुरा टुहुरी बनाए छाैं ।
हामी खेताला सिपाही हुन छाेराछाेरी पठाइ रहेका छाैं । आफ्नाे सन्तान खेताला सिपाहीमा भर्ना हुँदा आत्म गाैरव गरिरहेका छाैं । विदेशकाे भिसा लाग्दा, डिभि पिआर पाउँदा उपल्लाे दर्जाकाे ठान्दै खुसी मनाइ रहेका छाैं । नेपालीले आफ्नाे हाेइन, पराय देश राम्राे भन्दै आएकाे दुई शताब्द्धी नाघेकाे छ । याे भनेकाे करिब दश पुस्ता हाे । यति लामाे अवधिमा हाम्राे दिमाग गुलाम भइसकेकाे छ । एक प्रकार नेपालीकाे जिनमा गुलाम घुलित भइसकेकाे छ ।
अहिलेकाे युवा पुस्ता अवसर पाए झण्डै सतप्रतिशत विदेश पलायनकाे सपना देख्छ । त्यसकै तयारी र प्रयास गर्छ । त्यहीँकाे नागरिक हुन पाए हुन्थ्याे साेँच्छ । विदेशमै बसेर भावुक देशभक्त बनिरहेकाे छ । अब यस्ताे अवस्थामा हामीसँग राष्ट्रिय आत्मगाैरव कति हाेला ? स्वाभिमान र आत्मवल कति हाेला ? अहिलेकाे धरातलीय यथार्थता नेपालकाे यही हाे ।
राष्ट्रिय सार्वभाैमिकता र स्वाभिमान बचाउने हाे भने नेपाली मनाेविज्ञान परिवर्तन हुनु प्रथम शर्त हाे । मनाेविज्ञान परिवर्तन गर्ने हाम्राे साँस्कृतिक परिवर्तन हाे । हामीले खेताला सिपाही हाम्रा नानीहरूलाई बनाउने काम अब बन्द गर्नै पर्दछ । एउटा सार्वभाैम देशकाे नागरिक अर्काे देशकाे झण्डामूनि बसेर त्याे झण्डाकाे सार्वभाैमिकता संरक्षण गर्ने कसम खाइ रहनु, ज्यान बलिदान गरिरहनु, अरूकाे मुलुकका लागि वीर भइरहनु मानिसका कल्पित सत्य भन्दा बाहिरका विषय हुन् ।
हामी हाम्रै देशकाे झण्डामूनि बसेर वीर हुने, सपुत हुने, सहिद हुने सपनामा जानु आवश्यक छ । अबकाे नयाँ पुस्ताले कलाकार हुन हाेइन, निर्देशक हुन विदेश जाने सपना देख्नु पर्छ । हामीले त्याे सपना देखाउनै पर्छ । विदेशीकाे सेवा गरेर हाेइन, आफ्नै जातिकाे सेवा गरेर वीर हुनुपर्छ । त्यसका लागि अब पुरानाे कथाकाे हाेइन, अहिलेकै कल्पित मानक सृजना गर्नु आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलका आधारमा हाेइन, नेपाली नागरिक भएकाे आधारमा हामीले देशकाे सार्वभाैमिकताकाे प्रश्नलाई लिनु पर्दछ । नेपालकाे विडम्बना नै के रही आएकाे छ भने विदेशीले देशकाे सार्वभाैमिकतामा अतिक्रमण गर्दा त्याे देशकाे हाेइन, आफ्नाे सरकारकाे विराेध गर्ने । यसले देशेको स्वतन्त्रता र सार्वभाैमिकताका विषयमासमेत राष्ट्रिय अभिमत विभाजित भइ आएका छन् । जसले नेपाललाई कुटनीतिक मामिलामा थप कमजाेर बनाएकाे पाइन्छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सेनाकाे सवलता महत्वपूर्ण कुरा हाे । नेपालकाे सार्वभाैम सत्ता सुरक्षाका लागि मुख्य संयन्त्र राष्ट्रिय सेना नै हाे । प्रत्येक नागरिकले अनिवार्य सैनिक तालिम अबकाे दिनमा आवश्यकता छ । आधुनिक हतियार र व्यारेकहरू आवश्यक छ । शस्त्र र अस्त्रमा सैन्य क्षमता विस्तार हुनै पर्दछ । याे कसरी पनि भन्न सकिन्छ भने इजरायल जस्ताे एउटा सानाे देश दुनियाँकाे शक्तिशाली सैन्यशक्ति हुनुकाे आधार उस्काे आधुनिक अस्त्र र शस्त्रले सेना सम्पन्न हुनु नै हाे ।
इजराय जस्ताे सानाे देश राष्ट्रिय सुरक्षामा विश्वकै उत्कृष्ठ किन भयाे ? यसकाे एउटै कारण हाे उनीहरूकाे आत्मवल र उत्कृष्ठ हुने चाहना । नेपालले पनि त्याे हुन सम्भव छ । इजरायलीहरूमा हामी महान र उत्कृष्ठ छाैं भन्ने विश्वास थियाे, छ र त्यही अनुरूप गरेरहेका छन् । हामीमा विश्वास जाग्नु जरूरी छ । प्रत्येक यहुदी इजरायलकाे सेना हुनसक्छ भने नेपाली हुन नसक्ने हुन्न । हामीले हाम्राे महानता र उत्कृष्ठतामा विश्वास गर्नु पर्दछ ।
नेपालकाे विदेश नीति भनेकाे संयुक्त राष्ट्र संघकाे वडापत्रका सिद्धान्तहरू नै हुन् । असंलग्न र पञ्चशिलका सिद्धान्त नै हुन् । हामी छिमेकीसँग शान्ति र मित्रता चाहन्छाैं । तर यदि त्यसले काम नगरेमा 'झिकी कटक गर्नु त' छँदैछ ।
Posted by RD Kulung at 9:04 AM
दूरदर्शिता राख्नु पर्ने छ
प्रा. डा. युवराज संग्राैला
नाओमि क्लेइन एक्जना उत्कृष्ट अर्थशास्त्र विश्लेषक हुन। उन्ले "दि सक डाक्टर" भन्ने अत्यन्त सशक्त किताब एक दशक अगाडि नै लेखेकी थिइन। यि 'सक डाक्टर' भनेका मिल्टन फ्रिडमेन एक जना मनोबैज्ञानिक चिकित्सक क्याम्रोन भन्ने ब्यक्ति हुन। माक्गिल युनिभर्सिटीमा क्याम्रोन नामका एक मनोचिकित्सक कसरी "बिजुलीको सकद्वारा मानिसको सोच प्रणालीको आयाम बदल्ने" भनी सिआइएको सहयोगमा अनुसन्धान गर्दै थिए । त्यस क्रममा उन धेरै बिरामीकाे जीवन बर्बाद गरे। उन्ले उपचारका नाममा यातना प्रयोग गरे। उनलार्इ सिआइएले यातनाको साबित गराउने विधि पत्ता लगाउन यो काम गराएको थियो। उता सिकागो विश्वविद्यालय स्कुल अफ इकोनोमिक्समा मिल्टन फ्रिडमेन भनिने अर्थशास्त्री कसरी बजारलाई हस्तक्षेप रहित स्वतन्त्र बनाउने र अर्थतन्त्रलाई निजीकरण गर्ने भनी गहन अनुसन्धान गर्दै थिए। मानिसको सोचाइको आयाम बदल्न (ब्रेनवाशिङ्ग गर्न) बिजुलीको सक दिनु पर्छ भन्ने कुरा क्याम्रोनले पत्ता लगाए र उनले यसकालागि सयौं आफना पसेन्टको जिन्दगी बर्बाद गरे, तर अमेरिकी सरकारले क्याम्रोनलाई कारबाही गरेन। उल्टै यस यातनालाई बिज्ञान भनेर तारिफ गरियो।
उता जनताप्रति उत्तरदायी सरकार "कर्पोरेसनको अधिनमा हुनुपर्छ, र "राज्यले आफ्ना सम्पति पनि ब्यापारीलाई दिनुपर्छ भन्ने" मिल्टनले जब समाजमा संकट निर्माण हुन्छ, ठिक त्यही समयमा आर्थिक नीतिहरुमा एकाएक/आमुल परिवर्तन गर्ने वैकल्पिक नीतिहरु लागू गर्नु पर्छ भन्दै, बजारको पूर्ण अनियमन, निजीकरण र सामाजिक सुरक्षणमा पुर्ण कटौती गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रस्तावित गरे। यस्तो संकटलाई अवसर बनाएर गरिने आमूल परिवर्तनलाई मिल्टनले "इकोनोमिक सक" भने, नाओमिले लेखेकी छिन। यी दुई डाक्टरका सिद्धान्तले हामीलाई नेपालको अहिलेको समस्या बुझ्न मद्दत गर्छ्न। यी दुई "डाक्टर"ले संसारमा गरिबहरु माथि अत्याधिक ज्यादा अत्याचार गरे, नाओमिले भनेकी छ्न।
१. क्याम्रोनको "सक थेरापी" र मिल्टनको "इकोनोमिक सक" एउटै समयमा आएका सिद्धान्त हुन, र दुबैको उद्देश्य पथभ्रष्ट भएका अनैतिक ठुलठुला कर्पोरेसनका हितमा मात्र काम गर्ने पुजिँबादका पक्षमा, अरु सबै विचारधारालाई समाप्त गर्नु थियो। मार्क्सको वैज्ञानिक समाजवाद र केयनेसको विकासवद यी दुबैले गरेका अनुसन्धानका प्रहारका केन्द्र थिए। मिल्टन निक्सनलाई प्रभावित पारेर र उनले असीमित बजार स्वतन्त्रताको कार्यक्रम लागु गर्न चाहान्थे, तर निक्सनले उनलार्इ मान्याता दिएनन। त्यसैले मिल्टनले निक्सनलाई समाजवादी भएको आरोप लगाए र उनी कतै न कतै पैदा हुने राजनीतिक संकट पर्खिरहेका थिए।
२. त्यसै बेला इन्डोनेसियामा सुकार्नोको लोकप्रिय गारिबहरुको पक्षधर सत्ता ढालेर जनरल सुहार्तोलाई सत्तासिन बनाउन सिआइए अनेक कसरत गरिरहेको थियो। अन्ततः सुकार्नोको सत्ता अपदस्त गरेर इन्डोनेसियामा मानिसको आमहत्या सुरु भयो। मारिनुपर्ने मानिसको नाम सिआइएले दिएको थियो । नाओमि, नोम चोमस्की, क्याथी कादाने र अन्य थुप्रैले याे लेखेका छ्न। यो हत्यामा भुमिका खेलेको सिआइएले इन्डोनेसियाको अनुभव प्रयोग गर्दै चिलिको लोकतान्त्रिक सरकारका राष्ट्रपति साल्बाडोर आलान्डेको सत्ता ढाल्न जनरल पिनोचेलाई समर्थन गर्यो। यो दिन सेप्टेम्बर ११, १९७३ थियो। यसलार्इ नोम चोमस्कीले पहिलो ९/११ को घटना भनेका छ्न, जस्ले ल्याटिन अमेरिकामा पहिला आतंकवादको शुरु गर्यो, राज्यका तर्फबाट चोमस्कि भन्छ्न।
३. आलान्डेको सरकार अपदस्त गरेपछि, पहिला चिली पुग्ने दुई समुहमध्ये क्याम्रोनको "सक थेरापी" प्रयोग गर्ने सिआइए प्रशिक्षित याताना दिने मानिस र मिल्टनले प्रशिक्षित गरेका चिलीका अर्थशाश्त्रका विद्यार्थी थिए, जस्लार्इ "सिकागो ब्वाइज" भन्ने गरिन्छ। दुबैको उदेश्य "सक थेरापी" लागु गर्नु थियो। दुबैले जोडतोडका साथ अफ्ना ज्ञान प्रयोग गरे। इन्डोनेशियामा पनि यीनै "सक थेरापी" लागू गरिएको थियो। यहाँ सुहार्तोले बर्क्लेमा पढ्ने युवा इन्डोनेसियाली बिद्यार्थीहरु बोलाएका थिए। यिनीहरुलाई "बर्क्ले माफिया" भनिन्थ्यो, नाओमि भन्छिन।
४. चिलीमा क्याम्रोनका चेलाहरुले सयौं ठाउँमा यातना सिबिर बनाएर हजारौं मानिसलाई यातना दिए। ३२०० को हत्या गरे। बिजुलीको "सक लगाएर मानिसलाई केही सोच्न नसक्ने बनाए। केयनेसको विकासवादका समर्थक (जस्को निक्सनले पनि प्रयोग गरेका थिए) र समाजवादका पक्षधरको दिमाग बिजुलीको सकद्वारा समाप्त पार्न खोजियो। सिकागो ब्वाइजले, ब्यापारीलाई लगाइएको कर खारेज गरे, स्कुल र अस्पताल निजिकरण गरे, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममाथिको लगानी बन्द गरे। रास्ट्रका उद्योग र व्यावसायहरू लिलाम गरे। इन्डोनेसियामा बर्क्ले माफियाले पनि यसै गरे। यसरी गरिब र कर्पोरेटिस्ट पुजिँवादका विरोधिहरुको सर्बानास गरे। नवउदारवाद र सैनिक तनाशाहीकावीचमा "विवाह सम्पन्न" भयो। इन्डोनेसिया, चिली, उरुग्बे, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, ग्वाटेमाला सबै ठाउँमा सैनिक तानाशाहिको जन्म भयो । नवउदारवाद पनि लागू भयो । ठूल्ठुला कर्पोरेसनहरु ल्याटिन अमेरिकामा निर्वाध शोषण गर्न पनि पाए। विरोधिलाई क्याम्रोनको सक थेरापीले काम गर्यो।
५. इन्डोनेसियामा सुकार्नोले अन्तरास्ट्रिय मुद्राकोष र विश्वबैंकका कार्यक्रम बन्दगरि वाविन्ङ्ग्टन फिर्ता पठाएका थिए। आलान्डेले इन्टरनेसनल टेलिफोन तथा टेलिग्राफ र चिलीको तामा खानीमा एकाधिकार जमाएको अमेरिकन कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए। सुकार्नो र आलान्डे दुबै केयन्सेनियन थिए, मार्क्सवादी होइन। उनिहरु लोकतन्त्र र सामाजिक विकासलाई उन्न्त बनाउन सफल भएका थिए, जस्लाइ किसिन्जरले "डर्टी भाइरस" भनेका थिए। त्यस समयको ल्याटिन अमेरिका युरोप जस्तै देखिन्थ्यो भनी नाओमिले लेखेकी छिन। स्कुल सार्बजनिक थिए। युनिभर्सिटी सार्बजनिक थिए। गरिब र श्रमीकका छोराछोरी विश्वबिधालय जान पाए। अस्पताल सार्बजनिक थिए। तर जब मिल्टनको "नवउदारबादी सक र क्याम्रोनको बिजुली सक" शुरु भयो, चिलीको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो। ३०,००० मानिस बेपत्ता पारिए। इन्डोनेसियामा दशलाख मानिसको हत्या भयो।
६. मानव अधिकार यी देशहरुमा रोहिरह्यो। तर मानव अधिकारवादीले ति गरीबको खोजी गरेनन। मानव अधिकारका कुरा गर्ने संस्थालाई पनि सिआइएले लगानी गरेको हुदों रहेछ, नाओमिले लेखेकी छ्न। जे होस नवउदारवाद र सैनिक तानाशाहको राम्रो संयोजन मिल्ने रहेछ । त्यसबेला मानव अधिकारको खोजी नहुने रहेछ। स्पेनको एउटा अदालतले पिनोचेलाई पक्रीने वारेन्ट जारी गर्यो। तर पिनोचेलाई बेलायतमा हाउस एरेस्टमा राखेर बेलायतले संरक्षण गर्यो। मार्गरेट थ्याचर र पिनोचे राम्रा मित्र थिए। थ्याचर लोकतान्त्रिक थिइन, पिनोचे सैनिक तानाशाह। तर दुबैको बिस्वास एउटै थियो--नवउदारवाद। अमेरिकी बुद्धिजीवी कारोथेसले लेखेका छ्न, "अमेरीका लोकतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ र सुरक्षासँग जोडेर हेर्छ, अत आफ्ना प्रमुख स्वार्थहरु सङ्ग असंगत भए लोकतन्त्रको प्रबर्द्धनमा अमेरीकाको चासो हुँदैन।" त्यसैले सउदी अरब अमेरीकाको मित्र हो। तर तामा खानी रास्ट्रियकरण गर्ने चिलीको समर्थन गर्नु पर्ने कारण उसलाई रहेन, भलै त्यो लोकतन्त्र थियो। अर्थात बजार स्वतन्त्रता भयो भने लोकतन्त्र नभए पनि हुन्छ। त्यसैले कासिमलाई अपधस्त गरि सद्दामलाई ल्याइएको थियो। जब उस्ले तेलमा आफ्नो अधिन जनाउन खोज्यो उसलार्इ पनि समाप्त गरियो।
६. हिजो वीपीलाई अपदस्त गर्दा किन पश्चिमी शक्ति खासगरी अमेरीकाले आपत्ति गरेन? किनभने वीपी समाजवादी थिए। २०४८ साल पछि "एनआरएन" ठिट्टाहरु अर्थमन्त्री हुन आइपुगे। एकाएक चिया विकास निगम देखि छाला जुत्ता कारखाना बेचिए। गोकर्ण रिसोर्ट र तारागाउँ विकास समितिको जमिन होटललाई दिइयो। कागज कारखाना पनि लिलाम गरियो। यसो नगरी अरब र मलेसियामा काम्दार पठाउन सम्भव थिएन। मानिसलाई बेरोजगार पार्न नेपालका उद्योग समाप्त पारिए। सन १९८८ देखि १९९६ सम्म नेपालमा औधोगिक विकास दर १६ प्रतिशत थियो। तर सन् २००२ मा आइपुग्दा माइनस ४ प्रतिशतमा झर्यो। शिक्षा निजीकरण भयो। स्वास्थ निजीकरण भयो। यसप्रति आपती गर्ने मदन भण्डारी मारिए। गणेशमान वीपीवादी थिए, त्यसैले लखेटिए। काङ्ग्रेसमा समाजवाद सकियो, गैरसरकारीवालाले मार्क्सवादी पनि सिध्याए। मज्दुर संगठन गैरसरकारी संस्थामा परिणत भए।
सन २००३ पछि इराकको तेलमा अमेरिका र ब्रिटिस कर्पोरेसनहरुको पूर्ण अधिन कायम भयो। १७०० निजी सुरक्षा कम्पनीहरु र अनकौं कपोरेसनले अरबमा कामगर्ने मौका पाए। अहिले हाम्रा युवाहरु यिनै कम्पनी र अरु पश्चिमी कम्पनीमा काम गर्छन्। हेर्दा उनीहरु अरब गएका छ्न, तर यथार्थमा उनिहरु नवउदारवादले शोषण गरेका उतिबेला उपनिवेशले प्रयोग गरेका दास जस्तै बनाइएका छ्न। उनीहरुको पेन्सन छैन। उनीहरु बेरोजगार हुँदा पाल्ने सुरक्षा प्रणाली पनि छैन। उनीहरुको रगत र पसिना बगेको छ, यता जमिन सबै बांँझा छ्न। हामीलाई गोकर्ण बिस्टलाई किन निकालेको होला, यी त राम्रो काम गर्दै थिए भन्ने लाग्थ्यो। तर यिनले दुइटा गलत काम गरे। एउटा, यिनले सरकारले ति विदेश गएका मज्दुरको संरक्षण गर्न खोजेको देखाए। त्यो मलेसिया र अरबका पश्चिमी कर्पोरेसनलाई मन्जुर थिएन। यसैबेला यिन्ले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अगाडि ल्याए। यि यस्ता कार्यक्रम नवउदारबादलाइ मन पर्दैनन भन्ने बिस्टले थाह नै पाएनन।
उता कृषि मन्त्री "चक्लाबन्दी" नभएर कृषिको आधुनिकिकरण हुन नसक्ने भयो भन्दै हुनुहुन्छ। चक्लाबन्दि गरेर ठुलठुला फार्म बनाएपछि त किसानको ठूलो विकास हुन्छ भन्ने उहांँलार्इ लागेको छ। तर चक्लाबन्दी भएपछि आधुनिकिकरण गर्न त गरिबसँग पैसा हुँदैन। तब किसान सबै सकिन्छ्न। गरिब सकिएपछि त गरिबी सकियो नि।यो नवसाम्यबादको सिद्धांत हो कि! किसानलाई अहिले चाहिएको कुरा आधुनिक खेती गर्ने सीप र ज्ञान हो। उस्ले राम्रो बीउ चिन्नु पर्छ। उस्ले बर्खाको पानी अहाल खनेर जम्मा गर्न सकिन्छ भन्ने जान्नु पर्छ। उस्ले आफ्नो जमिनमा के खेती लगाउने हो भन्ने जान्नु पर्छ। उस्को बालिमा रोग लाग्दा सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ। जब किसान सचेत हुन्छ, उस्ले कोस्टारिका, भेनेन्जुएला, चीन, क्युवा, भारतको पन्जाब र केरलामा जस्तो आफै सहकारी निर्माण गरेर चक्ला बन्दीको बाताबरण बनाउंछ भन्ने मन्त्री ज्युले त बुझेकै होलान, तर तेसोगर्यो भने मानिस कृषिमा लागेर अरब जान बन्द गर्छ्न भन्ने डर यहाँका विदेश रोजगारका मालिकलाई थाह छ। ति त नेता र पुजिंपतीका कम्पनी हुन। तिनकाे रक्षा त विदेशी कर्पोरेसन र अर्थ मन्त्रालयले गरेकै हुन्छ। उनलार्इ सल्लाह दिनेले बताएको होला "हजुर किसानलाई त पैसापो पठाउनु पर्छ।" यता शिक्षा मन्त्रालयले उच्छ शिक्षा विधेक तयार गरेको रहेछ। त्यसमा विश्वविद्यालय खोल्न २/४ सय रोपनी जमिन र थुप्रै करोड पैसा चाहिने रहेछ। जिल्लाका मानिस मिलेर विश्वविद्यालय खोल्न नहुने रहेछ । त्यसमा पनि कर्पोरेसन नै चाहिने रहेछ।
नाओमि लेख्छिन, मानिसमा भ्रम जब सकिन्छ, उस्ले इतिहासको विश्लेषण गर्न थाल्छ। उस्ले सत्य भेट्छ। ३० बर्षपछि पिनोचेको सत्ता सकियो। अर्जेन्टिनाका शासकमाथि कारबाही भयो, न्यायाधीशले उन्लाइ आमहत्याको आरोपमा सजाय गरे। हाम्रो संस्कृतिले समयलाई चक्र मान्छ। देश बिगार्ने मानिसहरुलाई इतिहासले छोड्दैन। तर नेपालमा एउटा समस्या छ, नेपालीले प्रमाण खोज्दैन। भावनामा भड्किन्छ। उसलाई तत्काल परिवर्तन चाहिन्छ। उसकाे क्रान्ति भनेको अरुलाइ बेस्मारी गाली गर्नु हो। उसलार्इ समाज हाँक्ने विचारको खोजीको रहर लाग्दैन। मानिस गलत हुँदैन, गलत उस्ले बोकेको बिचारधारा र सोच हुन्छ। नाओमि भन्छिन, अमेरीकामा जुन रास्ट्रपति आउँदा पनि अर्काको सत्ता परिवर्तन गर्ने नीति गएन, किनकि त्यो बिचार हो नेता होइन कारण। नेपालमा गरिबलाई माया गर्ने भन्दा राणा हुन चाहने नेता र ६० किलोको माला लगाइदिएर चाकरी गर्ने कार्यकर्ताको बिगबिगी बिचारहिनताको परिणाम हो।
अमेरीकामा कोरोना भाइरस लागेको छ। ट्रम्प भन्छ्न "मानिस मर्छन भनेर उद्योग बन्द गर्न मिल्छ?" न्यु याेर्कका मेयर भन्छ्न, मानिससँग बांच्ने उपाय छैन। गरिबलाई दिइने कल्याणकारी सुबिधा मिल्टनले खाइदिए। उनी बाँचीरहेका भए, कोरोनालाई पनि तर्साउने गरि बजारलाई अझै स्वतन्त्र गर्ने थिए। यता नेपालमा गीत त बझीरहेका छ्न "यो देश हाम्रो हो"। यदि त्यसाे हो भने, किन सरकारले गरिबलाई एक महिना पाल्ने दायित्व नलिएको? किन कृषि मन्त्री ज्युले किसानका तरकारी बजारमा ल्याउने उपाए नसोच्नु भको? के गर्नु जमिन चक्लाबन्दि गर्न सकिएको छैन, त्यसैले होला।
बामपन्थी पार्टीलाइ गैंडालाई चिनी खुवाएर खाडलमा हाल्न खोजिंदै छ भन्ने थाह हुनु पर्ने हो। भबिस्यमा एउटा संकट आउन सक्छ भन्ने त ख्याल होला नै। ठुल्ठुला नेताले त सबै जानेकै हुन्छ, अझ नेपालमा नेताहरु सारै विद्वान। त्यसै कारण अहिले विश्वविद्यालयहरू आराममा, नेताहरू सक्रिय। चिलीमा रास्ट्रपतिको कार्यलयमा तोप हानिएको थियो। रास्ट्रपतिले ढोकामा आएर जनतालाई सम्बाेधन गरे। मलार्इ मारे पनि म तानाशाह समक्ष आत्मसमर्पण गर्दिन। उनले ज्यान दिए। त्यसपछि चिलीमा यातनाको राज्य शुरु भयो।
एक जना चिनिया प्राध्यापकले १९१२ मा भनेका थिए- नेतृत्वहिन जनता विवेक रहित हुन्छ। उ हल्लाका पछि हिँडछ। क्लिक पैसा कमाउने पत्राकार जन्मिन्छ्न। सुनरीमा देखियो नि, हैन? फरि थुप्रै अनलाइनले त कोरोना भन्दा राजनीतिक बहस मन पराएका छ्न। सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुबैले राम्रोसँग ख्याल गर्नु पर्ने हो कि ! जनता बाँचे मात्र देश रहन्छ। विचारबिनाको राजनीति र बम्बेको कामतीपुर उस्तै हुन्छ्न। राजनीतिक दलहरू विचारबिहिन हुँदा देशले दुख पाएको हो। सत्ता र बास्नाले लोभ्याउँछ। बास्ना पनि स्थायी हुँदैन, सत्ता पनि स्थायी हुँदैन। स्थायी इतिहास हुन्छ । अध्याँरोमा लुकेर बस्छ, मौका परेपछि मर्ने गरि ठुङ्छ।
(प्रा.डा. संग्राैलाकाे फेसबुकबाट साभार)
Posted by RD Kulung at 3:40 AM
किरात मङ्गाेल हुन् ?
सामान्य चलन चल्तीमा नेपालका आदिवासी समूदायलाई मङ्गोलियन भन्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा पहिचान नखुलेका कसैको हुलिया दिँदा सञ्चार माध्यमले नै मङ्गोलियन अनुहारको भन्ने गरेका छन् । यद्यपि त्यस्तो भाषाको आलोचना पनि हुने गरेको छ । यसरी चलन चल्ती प्रशस्त प्रयोग गरिएको शब्द जस्तै नेपालका आदिवासीहरु मङ्गोल नै हुन् त ? उनीहरुलाई मङ्गोल भन्ने आधार र कारण के हुन् ? यस विषयमा खासै छलफल भने हुने गरेको छैन । तथापि मङ्गोल शब्द सबै आदिवासी जनजाति समुदायका निम्ति सर्व स्वीकार्य शब्द भने होइन । यो छोटो लेखमा सबै आदिवासी जनजाति समुदायको नभइ किरातहरु मङ्गोल हुन् वा होइनन् ? भन्ने विषयमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
Kirat King Yalamber
मङ्गोल(मुगल) शब्दको उत्पत्ति
मंगोल शब्द कहाँबाट कसरी आयो ? त्यस बारे चर्चा गरौं । आठौं शताब्दीमा चिनीया ताङ वंशको शासन कालमा वर्तमान मङ्गोलिया देश रहेको भूभागका शिवेइ जनजाति सम्बन्धि वर्णन गर्ने क्रममा मङ्गोल शब्द पहिलो पटक प्रयोग भएको देखिन्छ । एघारौं शताब्दीको अन्ततिर लियाओ शासनमा खामाङ मङ्गोलहरु पुनःसंगठित भए भनिन्छ । सन् ११२५ मा लियाओ शासनको पतन भएपछि खामाङ मङ्गोल मङ्गोलियन भूखण्डको नेतृत्व पङ्तिका जाति भए । यद्यपि जिन राजवंश र तातार संघले युद्धमा कमजोर बनाएका थिए । बाह्रौं शताब्दीताका मंगोलियन पठार पाँच मुख्य घुमन्ते जातिहरु केराइटस्, खामग मंगोल, नाइमन, मेर्गिड र तातारले कन्फेडेरेसन(खान्लिङ)द्धारा प्रभूत्व जमाए ।
सन् १२०६ मा जेंगिस÷चंगेज खान(तेमुजिन बोर्जिगिन) सबैका शासक भए । उनी मङ्गोल साम्राज्यको सम्राट बनेपछि मंगोल त्यो क्षेत्रका घुमन्ते जातिहरुका लागि एकतावद्ध गर्ने साझा पहिचान भयो । जेंगिस खान एउटा कविला नायकबाट आजसम्म स्थापना भएकोमध्ये सबैभन्दा ठूलो साम्राज्यका शासक बने । उनको राज्यले पृथ्वीको २२ प्रतिशत भूभाग ओगटेको विश्वास गरिन्छ । मंगोल कविला नायक चंगेजले साम्राज्य स्थापना गरेपछि यो शब्द व्यापक हुन गयो । सन् १२४० मा गुयुक खानले पोप इन्नोसेन्ट चौथोलाई लेखेको पत्रमा महान मङ्गोलिन राज्यको महान खगन भनेर आफूलाई भनेका छन् ।
जेंगिसका वंशज ६ जनाले १६२ बर्ष मध्य एसियामा साम्राज्य चलाए । जेंगिज खानले स्थाना गरेको साम्राज्य विभाजित भएपनि उनका वंशजले मध्य एसियाका विभिन्न ठाउँमा शासन गरिरहेकै थिए । तिनैमध्येका बाबरले एकीकृत मंगोल साम्राज्य विघटन भएको १५८ बर्ष पछाडि भारतमा मुगल साम्राज्य स्थापना गरे । तुर्क मंगोल वंशका बाबरले स्थापना गरेको राज्य नै खास मुगल साम्राज्यका थियो । जेंगिसका सन्तानहरु इस्लाम र बौद्ध धर्ममा विभाजित थिए । बाबर इस्लाम धर्म अपनाउने वंशजमध्येका हुन् । खास नाम जाहिरुद्दिन मुहम्मद भएका उज्वेक योध्द्धा बाबरले दिल्लीका शासक इब्राहिम लोधीलाई पराजित गरेर २० अप्रिल १५२६ मा मुगल साम्राज्यको स्थापना गरेका थिए । मुगल शासक बाबर(बाघ) मंगोल वंशजका थिए । बाबर तुर्क मंगोल वंशी उज्वेक विजेता तैमुरलेनको पाँचौं पुस्ताका वंशज थिए भने तैमुरलेन स्वयम जेंगिस खाँका वंशज थिए । बाबरकी आमा जेंगिस खाँको चौधौं पुस्ताकी वंशज थिइन् ।
मंगोल शब्द नै अरबी र पर्सियनमा अपभ्रंस भएर मुगल हुन गएको हो । बाबरका पूर्खा तैमुरलेन मंगोल मुलका थिए भन्ने कुरालाई मुगल शब्दले जोड दिन्छ । नेपाल बाहेकको समग्र दक्षिण एसियमा करिब ३१६ बर्ष मुगल शासन चलेको थियो । वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र वंगलादेश मुगल साम्राज्यका भूभाग थिए । नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा मुगल शासनकै प्रभावले मंगोल, मुंलान(मुगल भूमि) शब्दहरु प्रयोगमा आए । नेपालमा प्रयोगमा रहेको मङगोल शब्द मुगल(मस्लिम) शासनबाट लिइएको देखिन्छ ।
Genghis Khan, Mongol emperor
मंगोलोइड के हो ?
मंगोलोइड शब्दले मानव समूहको नश्लीय वर्गीकरणको प्रयासलाई बुझाउँछ । होमो स्यापियेन्सलाई छाला र कपालको रङ, खप्परको बनावट, अनुहारको प्रकृति आदिलाई हेरेर विभाजनको प्रयास भएको पाइन्छ । प्राकृतिक इतिहासका प्राध्यपक तथा चिकित्सक(गोटिङजेन स्कुल अफ हिस्ट्री, जर्मनी) जोन फ्रेडरिक ब्लुमेनब्याकले सन १७७९ मा यिनै कुराका आधारमा मानवलाई पाँच नश्ल(प्रजाति)मा विभाजनको प्रस्ताव गरेका थिए । जुन यस प्रकार थिए ः कालालाई इथोपियन, गोरालाई ककेसियन, पहेँलोलाई मंगोलियन, रातोलाई अमेरिकन र खैरोलाई मलयन । मानव समुदायको विस्तारको इतिहास र सँस्कृतिका आधारमा नभइ शारिरको रंगका आधारमा प्रेडरिकले यो नश्ल विभाजन गरेको देखिन्छ । यो वर्गीकरण आलोचना गर्दै धेरैले मंगोल साम्राज्यबाट प्रभावित र जातीय विभेद प्रेरित पनि भनेका छन् । फ्रेडरिकको वर्गीकरण १९ औं शताब्दीमा व्यापक प्रयोग हुन गयो ।
बीसौं शताब्दीको शुरुमा गोराहरुलाई विभिन्न उप–समूह जस्तैं ः आर्यन÷नर्डिक(रसियादेखि उत्तरी व्रिटेन), अल्पाइन(रुस, फ्रेन्च, इटालियन, अष्ट्रियन, जर्मन, पूर्वी युरोप र वेल्स), मेडिटेरानियन(इटालियन, दक्षिण स्पेन, दक्षिण फ्रेन्च, ग्रिक र माल्टाली) र एङ्लो–सेल्टिक÷गेइलिक(स्कटिस, आइरिस र डच) भनेर विभाजन गरिएको पाइन्छ । यस्तो विभाजन विश्वलाई हेर्ने पूर्वाग्रह प्रेरित थियो भनिन्छ । युरोपियन र एसियन आफू आफू श्रेष्ठ र सुन्दर चाम्राको ठान्दथे ।
बीसौं शताब्दीको मध्यतिर अमेरकिन शारीरिक मानव शास्त्री कार्लटन स्टेभेन्स् कूनले पनि रङ र शारीरिक बनावटलाई हेरेर मानव नश्ललाई पाँच समूहमा वर्गीकरणको प्रयास गरेका थिए । कुनले आफ्नो पुस्तक ओरिजिन अफ रेसेज(१९६२) मा ककेसोइड(गोरा), निग्रोइड (काला), क्यापोइड (दक्षिण अफ्रिकाको केही जनजाति), मंगोलोइड (एसियन र अमेरिकी जाति) र अष्ट्रालोइड (अष्ट्रेलिया र पपुअन आदिवासी) भनेर उल्लेख गरेका छन् । यो विस्तृत जिनेटिक परिक्षण र यात्रा इतिहासको विश्लेषणद्धारा गरिएको वर्गीकरण भने थिएन ।
यो वर्गीकरण बारे चिनिया÷जापानिज उखान÷सुलेखन अनुसन्धान विशेषज्ञ ग्यारी वेस्टर्नग्रिनले टिप्पाणी गर्दे भनेका छन् – पुरातात्विक शब्द मंगोलाइड अब प्रयोगमा छैनन् । मानिसलाई वर्गीकरण गर्ने हतार र विचारले यस्तो नाम दिइयो । उनी अगाडि थप्छन्, मंगोलोइड डाउन सिन्ड्रोम(दशकौं मन्द बुद्धिको हुनु) रोगबाट पीडित व्यक्तिहरु बुझाउन प्रयोग गरिने शब्द हो । यो एउटा क्रृरर पदावली हो ।
मानव उत्पति र बसोबास
होमो स्यापियन्सको पूर्खा लगभग ३००,००० बर्ष पहिले उत्पत्ति भएको वैज्ञानिकहरुले अनुमान गरेका छन् । लामो समय मानव विकासले गति लिन सकेन । त्यो बेला मानिस अफ्रिका र अन्य केही क्षेत्रमा सिमित थिए । प्राध्यपक युवल नोआ हरारी भन्छन् – इशापूर्व ७०,००० बर्ष अगाडि होमो स्यापियन्सले संज्ञात्मक(बौद्धिक) क्रान्ति गर्यो । संज्ञात्मक क्रान्तिले मानवलाई परिकल्पनाशिल बनायो । त्यसको परिणाम आजका काल्पनिक वास्तविकताहरु सृजना गर्न मानव सफल भयो र पृथ्वीलाई नियन्त्रणमा राखेका छन् । त्यही समय वरिपरि होमो स्यापिएन्स पृथ्वीका विभिन्न भागमा विस्तार भए । हजारौं वर्ष मानिसले पृथ्वीका विभिन्न क्षेत्रमा घुमन्ते जीवन विताउँदै रहे । इशापूर्व १०,००० बर्ष पहिले मानवले क्रृषि गर्न गरे । स्थायी खेतीपाती र पशुपालनको शुरुवात भयो । यसले मानिसलाई स्थायी रुपमा बसोबास गरायो । मानव जातिको एकीकरण, यसै समयमा व्यापक भयो । एक आपसमा अन्तरकृया र ज्ञान आदान प्रदान गरे । सन् १५०० मा आएर वैज्ञानिक क्रान्ति शुरु भयो ।
दक्षिण एसियामा मानव बसोबासको कुरा गर्दा करिब ५५,००० बर्ष पहिले पहिलो होमो स्यापिएन्स भारतीय उपमहाव्दी आइपुगेको थिए । नेपालमा ३०,००० बर्ष पहिलेदेखि आधुनिक मानव बसोबास गरेको पुरातात्विक प्रमाण भेटिएका छन् । इसापूर्व ६५०० बर्ष पहिले खाद्यन्न बाली खेती र घरेलु जनावर पालेको, स्थायी संरचना निर्माण गरेको प्रमाण दक्षिण एसियामा पाइएका छन् । इन्दुस उपल्यकाको सभ्यता त्यसैको प्रमाण मानिन्छ । नेपाल एक प्राचिन देश हो र यहाँको प्रथम राजवंशको स्थापना भएकै ५,००० बर्ष नाघि सकेको छ ।
मानव सभ्यताको अति प्राचिन थलोमध्ये चीनलाई मानिन्छ । आधुनिक मानव होमो स्यापिएन्सको जीवास्म हेनानको फुयान गुफामा भेटिएको छ । पूरातत्वविदहरुले उक्त जीवास्म १२५,००० देखि ८०००० बर्ष पुरानो भएको अनुमान गरेका छन् । अफ्रिका पछाडि चिनमा मानव विकास भएको विश्वास गरिन्छ । प्रथम चिनीया राजवंश सियाको स्थापना इशापूर्व २१०० बर्ष अगाडि भएको उल्लेख छ । दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलक म्यान्मारमा करिब २५,००० बर्ष पुरानो होमो स्यापिएन्सको पुरातात्विक जीवास्म पाइएको छ ।
तिब्बतमा २१,००० बर्ष अगाडि मानिसहरु पुगेको विश्वास गरिन्छ । त्यस्तै ४० हजार बर्ष पहिले आधुनिक मानव मंगोलिया पुगेका थिए । मंगोलियामा २१,००० बर्ष पुराना मानव सृजित पुरातात्विक अवशेष पाइएका छन् । तिब्बत र मंगोलिया भन्दा अगाडि भियतनाम होमो स्यापिएन्स पुगेका थिए । चीन र अझ दक्षिण एसियामा अझ धेरै अगाडि मानव आगमन भएको पाएइको छ ।
किरात मङ्गोलियन होइनन्
किरात इतिहासका अध्येताहरु नेपालका आदिवासीलाई मङ्गोलियन हुन् भन्नेमा सहमत छैनन् । लेखक दुर्गाहाङ याखाराईले मङ्गोल शब्दलाई अस्वीकार गर्दै लेखेका छन् – यदि किरातलाई मङ्गोल भन्ने हो भने उनीहरु मुगल(मुसलमान ?) वा मंगोलियाबाट बसाइ सर्दै आइपुगेको जाति हुन्छ । उनले चालीस बर्षको अनुसन्धानपछि डा. स्वामी प्रपन्नचार्यले किरात मङ्गोल नभएको बताएको भनि लेखेका छन् । मङ्गोल शब्द्ध मुगलबाट उत्पत्ति भएको हो (पे.३४८) । डा. स्वामी प्रपन्चार्यका अनुसार किरात र मङ्गोलियाका बासिन्दाहरुको वंश, परम्परा र विश्वास केही पनि कहिल्यै मिलेको पाइन्न । ऋृग्वेद रचना (इसा पूर्व ३००० बर्ष) पहिलेबाटै किरातहरु भारतबर्षमा थिए । भारतका किरातहरु सम्बन्धि वृहत अध्ययन गरेका प्रा.डा.जीपी सिंह पनि किरातहरु मङ्गोल वा मङ्गोलियाबाट आएको मान्दैनन् । आरएन सलेडोरको भनाइ उदृत गर्दै जीपी सिंहले लेखेका छन्­ ‘किरातहरु प्राचीन मंगोल आदिवासीहरु थिए भन्ने धारणा काल्पनिक र आधारहीन कुरा हुन् ।’ सिंहले किरातहरु भारतीय उपमहादीपमै उत्पत्ति भएका आदिम् वासिन्दा मानेका छन् ।
Nepali Kirat Girls
किरातहरुको उत्पति वा आगमन बारे जोन हेमिलटनको उद्दरण गर्दै याखाराईले लेखेका छन् –ई.पू. ४००० अगाडि पर्सिया(इरान) खाडीको उत्तरी समतल भूभागमा दुईवटा सभ्य जाति बस्दथे । उत्तरी मैदानमा बस्नेलाई आकाद र दक्षिणी मैदानमा शौभार वंश बसोबास गर्दथे । शौभार वंशको एक ठूलो जमातले पूर्वदिशा आइ ई.पू. ३००० मा चीनमा राज्य स्थापना गरेका थिए । त्यसकै एक समूह छुट्टिएर काबुल, पञ्जाब(इन्दुस उपत्यका) भइ गंगा नदीको मैदानमा आएर बसोबास गर्न थाले । कैयौं पुस्तापछि यिनै शौभार वंशका मानिसलाई आर्यहरुले किरात सम्बोधन गर्न थाले ।
आफ्नो पुस्तक ब्राह्मणवाद विरुद्ध आदिवासी जनजाति र उत्पीडित वर्ग मा दुर्गाहाङ याखाराई लेख्छन् – किरात पूर्खा मानिएको शम्वर ऋृग्वेद कालमा आर्यवर्तको सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रका शासक थिए । उनका सयवटा फलामे किल्लाहरु थिए । उनलाई साथदिने राजाहरुमा शष्णु, पिप्रु, वर्चिन, धुनि, चुमुरी आदि थिए । शम्बरको प्रमुख शत्रु इन्द्र र दिवोदास थिए । वर्तमान काबुल, कन्दाहारदेखि कश्मिर, हिमाञ्चल, नेपाल हुँदै बर्मासम्मको समस्थ पर्वतीय र मैदानी क्षेत्रहरुमा सुदास, दिवोदास आदिलाई साथमा लिएर इन्द्रले ४० वर्षसम्म शम्बरसँग युद्ध गरे । युद्ध रोकिएको समय आफ्नो किल्लामा निदाइरहेको बेला इन्द्रले शम्बरलाई झुक्याएर मारेपछि युद्ध सकिएको थियो । यसले भारतमा आर्यहरुको प्रवेश पहिल्यै अर्थात ऋृग्वेद काल अगाडि नै पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा किरातहरुको बसोबास रहेको देखिन्छ ।
हिमालय क्षेत्रलाई किरात हिमवत खण्ड पौराणिक साहित्यमा भनिएकोले उनीहरु यहाँको आदिम बासिन्दा भएको देखिन्छ । प्राचीन भारतमा किरातहरु पुस्तकमा प्रोफेसर जीपी सिंह लेख्छन् –‘किरातहरुको उत्पत्ति र प्राचीनत्व अझै पनि रहस्यमय रहेको छ । अन्य प्राचीन भारतीय आदिवासीहरु झैं किरातहरुलाई पनि साधारणत ः आदिवासीको रुपमा वर्णन गरिएका छन् । यिनीहरु मुल रुपमा मध्य देशको गांगेय समतलभूमि, विभिन्न नदी तथा तिनीहरुका शाखा नदीहरुका किनारा, वनजंगल, मानसरोवर पोखरी छेउछाउमा अवस्थित कैलाश पर्वतको फेदी तथा यसका छेउछाउका ठाउँहरु, गंगा नदीका तीरमा अवस्थित प्रदेशहरु, पहाड एवं उपत्यका, पार्वतीय अञ्चल, जंगल, उत्तर र पूर्वी हिमालयका सिमाना इलाका, विन्ध्या अञ्चल तथा उत्तर पश्चिम, मध्य अनि पश्चिम भारत तथा डेक्कनका विभिन्न भागहरुमा बसोबास गर्नेहरु हुन् । किरातीहरु भारतका स्वदेशीहरु नै थिए ।
किरातहरु भारतवर्षको सर्व प्राचीन जातिहरुमध्येका थिए भन्नेमा करिब सबै इतिहासकार र अनुसान्धानकर्ताहरुको एकमत जस्तो देखिन्छ । नेपालको प्रारम्भिक इतिहासबाटै किरातहरुको चर्चा पाइन्छ । हिमालय पर्वतको दक्षिणी क्षेत्रका पहिलो आवादकर्ताहरु किरातहरु भएको विश्वास गरिन्छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो र दोश्रो शासन गर्ने गोपाल र महिषपालहरु पनि किरात वंशकै भएको दावी इतिहास लेखक दुर्गाहाङ याखाराईले दावाी गरेका छन् । उनले नेपालमा यलम्बर पूर्वका गोपाल र आहिर वंशी भनिएका राजाहरु पनि किरात नै थिए भनेका छन् । याखाराईको तर्क छ किम्दन्तीको भर परेर सँस्कृत भाषामा राजवंशवली लेख्दा गाई पाल्नेलाई गोपाल र भैँसी पाल्नेलाई महिसपाल भनिएको उल्लेख गरेका छन् । त्यो बेलाको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि किरात बाहेक अन्यको शासन कल्पना गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो किरात राजा यलम्बर भएकोमा सबै इतिहासकारको एकमत पाइन्छ । तात्कालिन समयमा नेपाल भनेर काठमाडौंलाई बुझिन्थ्यो । विभिन्न किरात समुदायको भाषामा काठमाडौंलाई यलाखोम भनिन्छ, यसको अर्थ यलम्बरको भुमि हो । सामान्यत ः नेपालमा ३२ पुस्ताका किरात राजाहरुले शासन गरेकोे इतिहासमा उल्लेख छ । प्रेमबहादुर माबोहाङले ३३ जना किरात राजाहरुको नाम उल्लेख गरेको पाइन्छ । कपिय इतिहासकारले २६ पुस्ताले शासन गरेको लेखेका छन् । प्रोफेसर सिंहले लेखेका छन् – समस्त सुत्रहरुको पूर्णतया छानविन पश्चात खृष्टपूर्व ३१०२ मा किरात शासन प्रारम्भ भएको देखिन्छ । माबोहाङले भने कलिगत ४० (इ.पू. ३०६१) मा राजा भूवनसिंहको राज्य विजय गरेर यलम्बरले किरात शासन प्रारम्भ गरेको भनेका छन् । किरातहरुको शासन कहिले शुरु भयो र कहिले अन्त्य भयो भनेर एकीन समय किटान गर्न सकिने अवस्था छैन तर किरात शासन इशापूर्व १७०० देखि ३००० बीचमा शुरु भएकोमा भने एकमत जस्तै देखिन्छ ।
केही इतिहासकार किरातका पूर्खाहरु प्राचीन चीनबाट भारतीय उप महाद्धीप आएको मान्दछन् । एसके चटर्जीका अनुसार ः सिनो–तिब्बती भाषा बोल्नेहरुको अथवा मंगोल जातिको मूल थलो उत्तर–पश्चिमी चीन थियो । तिनीहरु याङ्सी–क्याङ नदीको माथिल्लो भाग अनि ह्वाङ् होउ नदी(यल्लो रिभर) सम्मका फैलिएका थिए । तिनीहरु ब्रह्मापुत्रबाट उत्तरपूर्वी भारत र मेकङ नदी भएर बर्मा हुँदै भारतमा प्रवेश गरे । तिनीहरु क्रमशः असाम, बङ्गालका विभिन्न भूभाग, नेपालको तल्लो हिमाली क्षेत्र तथा गंगा नदीको उपत्यकासम्म छरिएर बसे ।
सिंह लगायतका धेरै इतिहासकारको मतमा किरातहरु प्राचीन भारतका सुप्रसिद्ध आदिवासीहरु थिए । प्राचीन सँस्कृत साहित्यमा यो नाम भारतीय मुलका आदिवासीहरुप्रति प्रयोग गरिन्थ्यो । क्रिश्चियन युग प्रारम्भ हुनुअघि भारतमा सिनो–तिब्बती र तिब्बत–बर्मी परिवार प्रवेश गरेको ऐतिहासिक अभिलेख कतै पाइँदैन । यसले के स्पष्ट गर्दछ भने प्राचीन भारतका प्रथमवासी नै किरात थिए (सिंह, पृ.७५)।
त्यस्तै ग्यारी वेस्टर्नग्रिन भन्छन् – पुरातात्विक शब्द मंगोलाइड अब प्रयोगमा छैनन् । जहाँसम्म उत्पत्ति हो, त्यतिखेर टिपिएको शब्द मात्रै हो, जसले चिनिया, कोरियाली, जापानी, मंगोलियाली र अन्य मिल्दाहरुलाई जनाइयो । लामो समयदेखि मंगोलोइडसँग मिल्दोजुल्दो शब्द ओरिएन्टल थियो । पछिल्लो समय ओरएिन्टल शब्द लोकपृय बन्दै गएको छ । दुःखको कुरा, मंगोलोइड या ओरिएन्टललाई प्रतिस्थापन गर्ने उचित वा राजनीतिक रुपमा उपयुक्त शब्द उलब्ध छैन । राम्रो यो होला कि विशेष गरी चिनियाँ, जापानी, कोरियाली, भियतनामी आदि भन्नु ।
किरात मिथक र इतिहास यो पङ्तिकारको रुचिको क्षेत्र हो । दुबैको अध्ययनका क्रममा प्रष्ट हुन्छ, हिमालय दक्षिण, गंगाको उत्तरी भाग र ब्रहम्पुत्रको वरिपरि नै किरात सभ्यता विकासको क्षेत्र हो । किरात मिथकहरुमा गंगा, ब्रहम्पुत्र र कैलाश (हिमालय) पटक पटक आउँछन् । मङ्गोल या मुगलसँगको सम्बन्ध भने संकेतसम्म कतै भेटिन्न । भाइ अरिक खाँले राज्य विभाजन गरेपछि कुब्लाइ खाँले पूर्वी मंगोल साम्राज्य(चिन)लाई महान युआन साम्राज्य नाम दिए । कुब्लाइ खान हान वंश भन्दा अर्को जातिको पहिलो चिनिया सम्राट मानिन्छ । यसले कुब्लाइ खाँकै पालामा मंगोल शब्द सर्व स्वीकृत नभएको र युआन साम्राज्य भन्न थालेको देखिन्छ ।
हिमालय दक्षिण भारतीय उपमहाव्दिपमा किरात असाध्यै पुरानो सभ्यता र समुदाय हो । वर्तमान मङ्गोलियामा आधुनिक मानव पूर्खा पुग्नु भन्दा हजारौं बर्ष अगाडि यहाँ आइसकेका थिए । इन्दुस उपत्यकामा शहरी संरचना निर्माण भएकै ८५०० बर्ष नाघेको छ । नेपालमा प्रथम किरात राजवंश स्थापना भएकै ५००० बर्ष भन्दा धेरै भएको छ । मङ्गोलियनहरुको इतिहास पुगनपुग १२०० बर्ष पुरानो छ । जेंगिस खान(तेमुजिन)ले मंगोलका नाममा शासक भएको ८०० बर्ष हुन्छ । जेंगिस खाँका नाती कुब्लाइ खाँले नै मंगोल नभनेर युआन शासक आफूलाई भनेका छन् । जेंगिस खाँको पराक्रमबाट प्रभावित तुर्क मङ्गोल वंशका बाबरले भारतमा मुगल साम्राज्य स्थापना गरेको पाँच सय बर्ष पनि भएको छैन । मुगलहरु मुसलमान थिए । इतिहासका सबै तथ्यहरु विश्लेषण गर्दा प्रष्ट हुन्छ कि किरातहरु मंगोल होइनन् । मंगोलको भन्दा किरातीको हजारौं बर्ष पुरानो सभ्यता र फरक इतिहास छ । नेपालका अन्य जनजातिय समुदायको इतिहास र सभ्यता पनि फरक रहेको देखिन्छ । निश्कर्षमा यो भन्न सकिन्छ कि नेपालमा मंगोल समुदाय छैनन् । नश्लीय वर्गीकरणमा नै राखिएको किन नहोस् ।
१. सिंह, जीपी, १९९०), प्राचीन भारतमा किरातहरू, अनु. टीबी राई, निर्माण प्रकाशन, नाम्ची दक्षिण सिक्किम ।
२. याखाराई, दुर्गाहाङ (१९९६), ब्राह्मणवाद विरुद्ध आदिवासी जनजाति र उत्पीडित वर्ग, धनरानी याखाराई, मैतीदेवी, काठमाडौं
३. थोमरोस् भूपध्वज(२०५७), कुलुङ सांस्कृतिक अध्ययन, टिएमआई, काठमाडौं, नेपाल ।
४. कुलुङ आर.डी, किरात मिथक,
५. खम्बू, सिएम ः२००५, राई को हुन् ? निमपुटी लेप्चा, नाम्ची, दक्षिण सिक्किम ।
६. गुगलको विश्वकोष प्रसस्तै प्रयोग गरिएको छ ।
Posted by RD Kulung at 4:58 AM
वीपी दूरदर्शी ! केपी पटमुर्ख ?
प्रत्येक वर्ष बस्नु पर्ने महासमिति बैठक पाँच बर्षमा नेपाली कांग्रेसले बाेलाएकाे छ । अहिले राजधानीमा जारी महासमिति बैठकलार्इ लिएर सञ्चार माध्यम कांग्रेसमय भएका छन् । नेताहरू मात्रै नभएर कांग्रेस समर्थक बुद्दिजीविहरू सल्बलाएका छन् । उनीहरूले अाफ्नाे विचारहरू सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यही मेसाेमा अनलाइन खबरमा छापिएकाे सुदर्शन अाचार्यकाे लेख 'वीपी, केपी र पुष १ ! फेरि अर्काे वीपी चाहियाे ! वीपीले समय पाएनन्, केपीकाे भिजन भएन (https://www.onlinekhabar.com/2018/12/727206)' पढेपछि केही कुरा लेख्न मन लाग्याे । अाचार्यजीले वीपी र केपीकाे तुलना गर्दै वीपीकाे अति प्रसंसा र केपीकाे भर्त्सना गरेका रहेछन् । एक कांग्रेसीबाट केपीकाे भर्त्सना वा विराेध हुनु कुनै अनाैठाे हाेइन । केपी अालाेचना गर्न नपर्ने मानिस नै पनि हाेइनन् । केपीकाे अनेक पक्षमा अालाेचना, समालाेचना चल्दै जालान्, चल्नेछ र चल्नु पनि पर्छ । वर्तमान राजनीतिकाे स्टेरिङ सिटमा विराजमान केपीकाे काम गरार्इ जनताका निम्ति उति रूचिकर नसकि रहेकाे अहिलेकाे सफेद वास्तविकता नै हाे । यही सेराेफेराेमा अाचार्यले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी काेइराला र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी अाेलीकाे भिजनकाे तुलना गर्दै वीपीलार्इ हिराे र केपीलार्इ जिराे बनाएर अगाडि सारेका छन् । यही सन्दर्भमा अब वीपी र केपीकाे भिजनकाे केही कुरा गराैं।
वीपी नेपाली समाजकाे चेतना स्तर साह्रै कमजाेर रहेकाे समयमा ४४ बर्ष ८ महिना १९ दिनकाे उमेरमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रधानमन्त्री हुनु अघि वीपीले राजकाजकाे अनुभव हासिल गरिसकेका थिए । माेहनसमसेरकाे मन्त्री मण्डलमा करिब ९ महिना गृहमन्त्रालय वीपीले सम्हालेका थिए । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्व पङ्तीमा १३ बर्ष रहिसकेका र सभापति नै करिब ५ बर्ष चलाइ सकेका थिए । त्याे बेलाकाे समयमा वीपी प्रधानमन्त्री (प्रम) भएकाे उमेर निक्कै परिपक्व अवस्था थियाे, मानिन्थ्याे । नेपालीकाे सरदर अायु त्याे बेला करिब ४० बर्ष थियाे । याे हिसाबले वीपी प्रम भएकाे उमेर र अनुभव यथेष्ठ थियाे । साथै उनी भारतबाट उच्चशिक्षा प्राप्त पनि थिए । उनले २००७ साल यता नेपाली राजनीतिकाे भित्री अन्तर्यसमेत राम्राेसँग बुझेकै थिए ।
२७ मे १९५९ मा दुर्इ तिहाइ बहुमतसहित प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका वीपी कतिकाे भिजन भएकाे मानिस थिए भन्ने थाेरै विश्लेषण गराैं । राणा शासनकाे अन्त्य भइ प्रजातन्त्रकाे स्थापना (भारतकाे कथपुतलीतन्त्र) भए पश्चात राजा त्रिभूवनले संविधानसभाकाे निर्वाचनद्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिकाले बनाएकाे गणतान्त्रिक संविधान मार्फत अबकाे शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने सार्वजनिक कबुल गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसकाे माग पनि संविधान सभाकाे निर्वाचन नै थियाे । तर राजाले संविधान सभाकाे निर्वाचन गराउन अग्रसरता देखाएनन् । अनेक राजनीतिक दाउपेच र कांग्रेसकाे अदुरदर्शिताकाे कारण संक्रमण काल लम्बिएर २०१५ सालसम्म अाइ पुग्याे । राजाले २०१५ सालमा संविधानसभाकाे निर्वाचन नभइ अाम निर्वाचन गराउने घाेषणा गरे । वीपी र उनकाे दलले अाम निर्वाचन र संविधानसभाकाे निर्वाचनकाे भिन्नता भेउ पाउन सकेनन् । अन्तत निर्वाचित संसदद्वारा संविधान बनाउने जनअाकांक्षमा पूर्णविराम लाग्न गएकाे थियाे र राजाले बक्सेकाे संविधान बमाेजिम भएकाे चुनावबाट वीपी प्रम हुन पुगे ।
दुर्इ तिहाइ बहुमत सहित निर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपीले अाफू प्रम भएपछि लाेकतन्त्रलार्इ संस्थागत गर्ने, संविधानमा भएकाे राजाकाे निरङ्कुस अधिकारलार्इ व्यवस्थापन गर्ने, पार्टिकाे अान्तरिक किचलाे मिलाउने कुरामा कुनै विचार पुर्याउन सकेनन् । जनतालार्इ प्रत्यक्ष लाभ दिने युगान्तकारी कार्यक्रम घाेषणा र कार्यन्वयन गर्न ध्यान पुर्याएनन् । बरू भारतसँगकाे संदिग्ध सम्बन्धमा विस्तार गरे । यसबाट मानिसमा निरासा पैदा हुनु स्वभाविक थियाे । अाफू पछाडिका बरिष्ठ कांग्रेस नेताहरू डा. तुलसी गिरी, परशुनारायण चाैधरी, विश्वबन्धु थापा लगायतले उनलार्इ प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्त गर्न याेजना बनाइ रहेकाे समेत थाहा पाउन सकेनन् वीपीले । उनी भारतकाे भराेसामा सधैंकाे जिमिन्दार हुँ शैलीमा कुर्सीमा अाशिन रहे । परन्तु उनी अाफ्नै साथीहरूकाे याेजनामा प्रधानमन्त्री भएकाे १ बर्ष ६ महिना १८ दिनमा अपदस्त हुन पुगे । यदि वीपीमा दूरदृष्टि थियाे भने २०१७ पुष १ गतेकाे घटना किन अाँकलन गर्न सकेनन् ? अपदस्त भइसकेपछि पनि उनले प्रजातन्त्र स्थापनाकाे लागि सही भूमिका खेल्न र निर्णय लिन सकेनन्। जसका कारण धेरै कांग्रेस कार्यकर्ताले अनाहकमा ज्यान गुमाउन र दुःख पाउनु पर्याे । दलहरूबीच दरार कायम बढी रह्याे । इन्दिरा गान्धीले अपमान नगरेकाे भए वीपी नेपालसमेत फर्कने थिएनन् । अब वीपी कतिका भिजन भएका मानिस थिए ? अाफैँ विचार गर्ने हाे ।
अब कुरा गराैं केपी अाेलीकाे । केपी र वीपी फरक समय र परिस्थितिका नेता हुन् । यस मानेमा उनीहरूकाे तुलना गर्नु उती प्रासङ्गिक पनि नहाेला । तर तुलना गरेर लेखेपछि केही कुरा गर्न मन लाग्याे । यहाँ विचार गर्नु पर्ने कुरा के हाे भने जीवित मानिसकाे कमजाेरी देखिन्छ जरूर सबैकाे । त्यसैले उ सबैकाे पुज्य हुन बहुत कठीन कुरा हाे । यसाे भन्दैमा केपी साह्रै गजब मानिस भन्न खाेजिएकाे कदापि हाेइन । तर केपी नेपाली राजनीतिका एक जबरजस्त पात्र हुन् । उनकाे चर्चा विना समकालिन नेपालकाे राजनीति अपुराे, अधुराे नै हुन्छ ।
वीपी र केपीमा केही समानता पनि छन् । वीपीले राजकाजकाे शुरूवात गृहमन्त्रीबाट गरेका थिए । केपीकाे पनि गृहमन्त्रीबाटै शुरू भएकाे थियाे । वीपी ९ महिना गृहमन्त्री भए, केपी पनि ९ महिना नै गृहमन्त्री भए । वीपी दुर्इ तिहाइकाे प्रधानमन्त्री भएका थिए । केपी पनि दुर्इ तिहाइकाे समर्थनमा प्रधानमन्त्री छन् । तर धेरै असमानता पनि छन् । वीपी मरिसके, केपी जिउँदा छन् । मरेपछि मानिस सबैकाे भगवान बनाउने नेपाली पारा नै हाे । स्वभाविक रूपमा वीपी मरेपछि सबैका पूज्य र कांग्रेसका लागि त दीव्य पुञ्ज नै हुने भयाे । जिउँदा केपीकाे खेदाे खनिनु, अालाेचना गरिन सामान्य कुरा हाे । उनकै पार्टिका नेताले गरेका छन्, कांग्रेसबाट नहुने, जनताले अालाेचना नगर्ने त प्रश्नै भएन ।
वीपी गृहमन्त्री हुँदा अाफैँले गाेली हानेर केही मानिस मारेका थिए, केपी गृहमन्त्री हुँदा सरकारी गाेलीबाट १ जना मानिसले जीवन गुमाउन परेन । पहिलाे पटक ९ महिना प्रधानमन्त्री भएकाे समय केपीले सबै नेपालीकाे वाह ! वाही !! पाएका थिए । प्रधानमन्त्रीकाे कुर्सीबाट बाहिरिँदा वाह ! वाही !! पाउने अाजसम्मका एक मात्रै प्रम केपी हुन् । वीपी गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा नै अत्यन्त अालाेचित थिए । दाेश्राे पटक केपी प्रधानमन्त्री छन् । उनकाे याे इनिङ १० महिनामा चल्दैछ तर याे पटक केपीकाे लाेकप्रियताकाे ग्राफ अाश्चर्यजनक रूपले गिर्दाे छ । तर समय घर्काइ सकेका छैनन् । धेरै महत्वपूर्ण कुराहरू अगाडि सारेका छन् । तर ठाेस नीति, याेजना र कार्यन्वयनमा साह्रै कमजाेर देखिन थालेका छन् । माैकै भने गुमाइ सकेका छैनन् । केपीकाे भिजन कार्यन्वयन गर्ने माैका अझै छ । यस्ताे अवस्थामा अहिले नै केपीकाे समग्र मूल्याङ्कन गरिहाल्नु निक्कै हताराे हुनसक्छ । तथापि पहिलाे इनिङ्मा जस्ताे उत्साह जगाउन नसकेकाे सत्य हाे।
सामान्यतः मानिस, समाज, संगठन र राज्य वर्तमान र भविश्यका लागि बाँच्छ । विगत वा दिवङ्गतबाट प्रेरणा लिने मात्रै हाे । साेही कुरा ख्याल गरेर काम गर्छ, गर्नुपर्छ, नकि विगतकाे नाेस्टाल्जिक भएर अात्मरतिमा रमाउने । नेपाली कांग्रेसले अब विगत हाेइन, वर्तमान र भविश्य सम्झेर बाँच्नु पर्छ । नीति, याेजना र कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । त्यसलार्इ बाेक्न सक्ने नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । २० अाैं शताब्द्धीकाे वीपीकाे सम्झना र कल्पना बाँच्ने हाे भने कहीँ पुग्दैन । अर्काे वीपी हाेइन, कांग्रेसलार्इ अाज र भाेलिका लागि राम्राे भविश्य जन्माउन सक्ने नेता चाहिएकाे छ । वीपीकाे तिर्सनामा बाँच्ने शाेकगीतमा मग्न नेता हाेइन । अाेलीकाे दलकाे बाटाे पनि यसभन्दा फरक छैन ।
Posted by RD Kulung at 12:19 AM
पिताजीले सुनाउनु भएकाे कथामा याेगमाया
योगमाया न्यौपाने (बि.सं. १९२४-१९९८) बारेमा छास्छुस् केही सुन्दै र पढ्दै आएको थिएँ । तर मैले योगमाया बारेमा उति ध्यान दिएर आजसम्म पढेको छैन । सङ्खुवासभाका लेखक मात्रिका तिम्सिनाले योगमायाको बारेमा पुस्तक लेखेको आज भन्दा १५ बर्ष पहिले नै देखे जस्तो लाग्छ । स्थानीय विभिन्न प्रकाशनहरुमा पनि योगमाया बारेमा लेख लेखेको र महिला अधिकारका कार्यक्रममा गरेको भाषण देखेको, सुनेको थिएँ । र पनि मलाई योगमायाले खासै छोएको थिएन । यसको एउटा खास कारण २८ बर्ष पहिले मेरो पिताजीले सुनाउनु भएको एउटा कथा मेरो दिमागमा गढेर बसेकाले होला । त्यो कथा यहाँहरुसँग शेयर गर्छु र निलम कार्की निहारिकाको योगमाया बारेमा मेरो कुरा राख्नेने छु ।
राम न्वमी मेला हेर्न बाबुु-आमाको पुछारे लागेर २०४६ चैत्रको अन्तिम हप्तातिरको कुनै दिन भोजपुरको दिङ्ला जाँदै थिएँ । मेरो गाउँ वालुङबाट दिङ्ला जाँदा अरुण नदीको उत्तरी किनारै किनार जानुपर्छ । अरूण नदीमा मिसिनु अघि करिब ४ किलाे मिटर जतिकाे दुरिमा सङ्खोवा खोला भाेजपुर र सङ्खुवासभाकाे प्राकृतिक सिमा भएर बग्दछ । सङ्खाेवा खोला तरेर बुम्लिङ प्रवेश गर्ने बित्तिकै केही मन्दिर कुटीहरु अाउँछ । त्यसकै नजिकबाट बाटाे हिँड्नु पर्दथ्याे । त्यो कुटी र मन्दिरका बारेमा जानकारी गराउँदै मेरो पिताजीले मलार्इ योगमायाको कथा सुनाउनु भएको थियो । जतिबेला म करिब ११ बर्षको थिएँ ।
पिताजीले सुनाउनु भएको कथा यस्ताे थियाे : धेरै अघि योगमाया नामकी एउटी वाल बिधवा बाहुनी थिइन् । उनले धर्मविरुद्ध विधवा विवाह अजातसँग गरेकी थिइन् रे ! (बाहुन महिलाले विधवा विवाह गर्न हुन्न भन्ने त्यही बेला थाहा पाएको थिएँ।) सामाजिक मान्यता विरुद्ध विहे गरेकी उनलाई गाउँमा बस्न नमिल्ने भएछ । त्यसैले देश छाडेर आसाम पुगेर बसिन् । आसाममा उनको बच्चा जन्मिएछ । बच्चा जन्मेपछि उनको श्रीमान बितेछन् (तथ्य थाहा छैन) । फेरि उनले उतै क्षेत्रीसँग विहे गरिछन् । त्यसपछि उनले आफूलाई भक्तिनी बताउन थालिन् । उनले आफूमा अलौकिक शक्ति प्रवेश गरेर भक्तिनी भएको भनेर अरुलाई प्रवचन दिन शुरु गरिछन् । यो क्रम बढ्दै जाँदा उनी आसाममा आलोचित भइन् । त्यसपछि अब आफ्नै देशमा गएर आफूले अलौकिक शक्तिद्वारा प्राप्त ज्ञान बाँड्ने भन्दै नेपाल फर्किछन् । उनले गाउँमा आएर विधवाले विवाह गर्न पाउनुपर्ने, बाल विवाह गर्न नहुने, जात खस्ने प्रथा हट्नु पर्ने, महिलाले पनि गुरु हुन पाउनु पर्ने जस्ता कुरा उठाइ छिन् । उनको यस्तो कुरा त्यो बेला मन पराइएन । त्यसैले योगमायाले धर्म विरुद्ध समाज भड्काएको उजुरी राणा प्रधानमन्त्री कहाँ गरिएछ ।
राणा प्रधानमन्त्रीले योगमायालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्न आदेश दिए । याेगमायालाई पक्राउ गरियो । उनले आफूले धर्म, सरकार र समाज विरुद्ध कुनै काम नगरेको बताउँदै श्री ३ सरकारसँग भेट्न माग गरिछन् । जुद्धसमसेरलाई उनको कुरा सुनाइएछ । जुद्धसमसेरले दर्शन भेट दिएछन् । भेटमा योगमायाले राणा प्रधानमन्त्रीलाई प्रभाव पार्न सकिन् । परिणाम स्वरूप उनलाई मझुवावेँशीमा कुटी बनाएर ध्यान र तप गरेर बस्न दिइएछ । त्यसपछि उनले त्यहाँ कुटी बनाएर प्रवचन दिन थालिन् । योगमायाको कुरा सुनेर धेरै जना महिला पुरुष उनको भक्त भए ।
याेगमायाकाे काल्पनिक तस्विर
उनको प्रसिद्धि बढेर जान थाल्यो । भक्तहरु बढ्दै गए । योगमायाले आफ्ना विचारहरु सबैलाई सुनाउँँदै गइन । त्यसबीच अझ कडा तपस्या गरेर सिद्धी प्राप्त गर्ने र आफूले भनेको जस्तो व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरा योगमायाले भक्तहरुलाई बताइन् । भक्तहरु गुरु आामाले भने अनुसार कडा तपस्या गर्न तयार भए । उनीहरूले त्यस्तो उच्चस्तरको तपस्या गर्मी ठाउँमा नहुने ठहर गरे । अब तपस्या गर्ने पवित्र स्थान कैलाशको खोजी भयो । त्यस्तो ठाउँ सङ्खोवा खोलाको शीर, मकालु हिमालको फेदीमा (तोङ्राफु?) उपयुक्त भएको निष्कर्ष निस्किएछ ।
अब योगमाया दर्जनौं महिला पुरुष भक्तहरुसहित मकालु हिमालको फेदमा तपस्या गर्न जाने भइन् । आवश्यक बन्दोबस्त सहित उनीहरु हिमाल तिर लागे । त्यहाँ तपस्या स्थल निर्माण गरेर उच्चस्तरको सिद्धि प्राप्त गर्न सबै जना ध्यानमा बसे । हिमालको ठाउँ, चिसो थियो । आगो बाल्ने पर्याप्त दाउरा र आवश्यक न्याना कपडा तपस्वीहरुसँग थिएन । त्यसैले न्यानोका लागि महिला पुरुषकाे सँगै तपस्या र सुत, उठ भयो । यस्ताे बेला उनीहरुले आफ्नो काम बासनालाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् । धेरै तपस्वी महिला गर्भवती हुन पुगे ।
यो खराब खबर राणा प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यो । सबै तिर धर्म नष्ट गरेको हल्ला फैलियो । यसले गर्दा सरकारले मृत्यु दण्ड दिन सक्ने र अरु मानिसबाट अपहेलित हुने अवस्था आयो । समाज कठोर र पुरुष प्रधान थियो । यस्तो अवस्थामा योगमायाले आफ्ना भक्त महिलाहरुको भावी दिन राम्रो देखिनन् । लाेकलाज र मृत्यु दण्डबाट बच्ने विकल्प याेगमायाले खाेज्न थालिन् । विकल्पमा उनले अरुण नदीमा सामुहिक आत्मदाहको प्रस्ताव ल्याइन् । गर्भवती भक्तिनीहरुले यसमा मञ्जुरी जनाए । अनि उनीहरु बुम्लिङ झरे । बुम्लिङबाट सयौंका संख्यामा रहेका महिलाहरूले योगमायाकाे नेतृत्वमा अरुण नदीमा जिउँदै आफूलाई समाधिस्थ गरे !
योगमायाकाे बारेमा पिताजीले सुनाउनु भएको कथा यही थियो । लामो समय योगमायालाई पिताजीले सुनाउनु भएको कथाको पात्रकै रुपमा बुझ्दै आएको थिएँ । निलम कार्की निहारिकाको ´योगमाया`ले मदन पुरस्कार पाएपछि मलाई अरुहरुले बयान गरेको योगमाया बुझ्न, पढ्न मन लागेको छ ।
Posted by RD Kulung at 11:53 PM
दुईतिहाइ बहुमत कटाक्षकाे विषय हाे ?
प्रजातन्त्र स्थापना भएकाे २८ बर्षमा तीन पटक दल विशेषले बहुमत प्राप्त गरेका छन् । पहिलाे अामनिर्वाचन २०४८ र दाेश्राे अामनिर्वाचन २०५६ मा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुम पाएकाे थियाे । गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाबाट निर्मित संविधान अनुसार भएकाे प्रथम अामनिर्वाचन २०७४ मा पहिलाे पटक कम्युनिष्ट पार्टिले करिब दुर्इतिहाइकाे हाराहारीमा सिट जितेकाे छ । नेपालकाे इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टिले लाेकप्रिय निर्वाचनबाट बहुम पाएकाे याे पहिलाे परिघटना हाे ।
तात्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्ट (माअाेवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरण सम्मकाे सहमती सहित बनेकाे कम्युनिष्ट गठबन्धनले गएकाे मङ्सिरमा भएकाे चुनावमा बहुमत हाँसिल भएपछि पहिलाे कम्युनिष्ट एकमना सरकार २०७४ फागुनमा गठन भएकाे छ ।
त्यसकाे नेतृत्व खड्गप्रसाद अाेलीले गरिरहेका छन् । गठबन्धन बनाउँदा संयुक्त घाेषणा-पत्रमा बाचा गरिए अनुसार दुबै पार्टि एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि निर्माण भइसकेकाे छ । जसकाे नेतृत्वमा सङ्घीय समाजवादी फाेरम नेपालसमेत सहभागी भएर अहिले संसदमा दुर्इतिहाइ बहुमत भएकाे सरकार कृयाशिल छ ।
लामाे समयपछि बहुमतकाे सरकार बनेकाे र त्यसमा पनि अाफुलार्इ क्रान्तिकारी दावी बामपन्थी दलहरूकाे भएकाेले जन अापेक्षा उच्च हुनु स्वभाविक थियाे र छ । त्यसमाथि अघिल्लाे पटक छाेटाे समय प्रधानमन्त्री भएका खड्गप्रसाद अाेलीले काम गर्न नपाइ विस्थापन हुनु परेकाे र उनले माैका पाए केही गर्नेछन् भन्ने खालकाे नेपाली जनताकाे अापेक्षाकाे भारी नै थियाे र छ।
सरकार गठन पश्चात सबैकाे अापेक्षा अनुसार यसले काम गर्न नसकेकाे गुनासाे सबैतिरबाट अाइरहेका छन्। सरकारबाट राम्रा कामहरूकाे अारम्भ अाशा गर्नु र साे नहुँदा गुनासाे वा अालाेचना स्वभाविक हुन्छ । त्याे अन्यथा विषय हाेइन । तर अहिले सरकारकाे अालाेचना हुँदा एउटा फुर्काे कटाक्ष पूर्वक जाेडिने गरेकाे देखिन्छ । त्याे हाे -दुर्इ तिहाइकाे सरकारले, दुर्इतिहाइकाे सरकार भएर, दुर्इतिहाइकाे दम्भ, दुर्इतिहाइकाे स्वेच्छाचारिता अादि इत्यादि ।
हरेकमा दुर्इतिहाइकाे कटाक्ष पूर्ण फुर्काे जाेडाइले कतै बहुमतकाे सरकार हुनु नै गलत त हाेइन ? भन्ने भ्रम सर्व साधारणमा पर्ने सम्भावना छ । कतै अल्पमत या खिचडी सरकार नै ठीक भन्ने मनाेभाव विकास हुने त हाेइन? जस्ता कुराहरू उठेका छन् । लामाे समय पछाडि देशले बहुमत सहितकाे सरकार पाउनुलार्इ राम्राे मानिनु पर्नेमा कटाक्षकाे विषय किन भइरहेकाे छ ? प्रकारान्तरले नेपालमा अस्थिर सरकार र राजनीतिक प्रणाली प्रवर्द्धन गरिरहेकाे छ यसले। याे निक्कै खतरनाक छ देशकाे भविश्यका लागि ।
यसमा मानिसकाे बानीले काम गरेकाे हुन सक्ने मलार्इ लाग्छ । यससँग सम्बिन्धत मानवीय बानीकाे एउटा वास्तविक कथाबाट यसलार्इ हेराैं । खाँदबारीका सिनियर पत्रकार गंगा विष्टले ११ बर्ष पहिले एउटा अनौठो अनुभव मलाई सुनाउनु भएको थियो ! त्यो अनुभव यस्तो थियो ।
तात्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारले २०५८ मङ्सिर ११ गते नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संकट काल लगाए पछि उनलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएर कुट्दै ब्यारेकमा लग्यो । ब्यारेकमा उनलाई आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो । हात पछाडि लगेर डोरीले कसिएको थियो । दैनिक लात र मुड्की बजाउँदै यातना दिने काम पनि उनीमाथि सेनाले जारी राख्यो । ट्वाइलेट जाने बेला मात्रै हात खोलिन्थ्यो र उनी अगाडि हात ल्याउन पाउँथे ।
शुरु शुरुमा उनलाई यो निक्कै कष्टकर लाग्यो । हात सधैं पछाडि बाँधिदा दुख्थ्यो । लडाएर राखिएको उनलाई सुत्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो । सैनिक हिरासतमा यो क्रममा तीन महिना चल्यो । अब मारिने नै रहेछ भनेर ज्यान माया मारेर र यातनाको वास्ता गर्न पनि छाडे !
पत्रकार गंगा विष्ट
यसबीच बाहिर गंगा विष्ट लगायतका पत्रकार र अधिकारकर्मीको जीवन रक्षाको आवाज राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठ्यो । यसको प्रभाव स्वरुप उनीहरुलाई सैनिक हिरासतबाट मुक्त गरेर जिल्ला कारागार लगियो । कारागार लगेपछि उनको हात खोलियो ।
पहिले पछाडि लगेर हात बाँधिदा गाह्रो मानेका उनलाई खुल्ला हात अगाडि ल्याउन गाह्रो लाग्थ्यो । करिब महिना दिन हात पछाडि मात्रै जान्थ्यो । पछाडि लानै सजिलो लाग्थ्यो ।
अहिले नेपाली मनोविज्ञान वा बानी विष्टलाई सेनाले यातना दिँदा पछाडि हात बाँधिदिएर ३ महिनामा परेको बानी जस्तै परेको रहेछ ।
२०५६ सालमा कांग्रेसले पाएको बहुमत सरकार (जुन बाँदरलाई नरिवल बनायो कांग्रेसले) बाहेक सधैं अल्पमत वा मिलीजुली देख्दै आएको थियो । यो १८ बर्षमा यस्तै नौरङ्गी र अनेक बान्कीका सरकार देख्ने, भोग्ने बानी परेका नेपालीलाई बहुमतको सरकार गंगा विष्टलाई हात खोलिँदा १ महिना परेको सकस जस्तै भएको प्रतीत हुन्छ ।
त्यसैले त सामान्य देखि बुद्धिजीवीसम्मका मानिस दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भन्दै जे कुरामा पनि कटाक्ष गर्दैछन्। कार्टुनिष्ट, टुइटे, फेसबुके, मिडियाकर्मी सबै सबै पछाडि बाँधिएको हातमा अभ्यस्त छन् । बहुमतको सरकार अभिषाप देखाउन उद्दत छन् ।
तर याद रहनुपर्ने कुरा हाम्रो हात पछाडि होइन, अगाडि नै हुनुपर्छ । पछाडि लगेर बाँधिएको हातले काम गर्न सकिन्न । कुबाटोको यात्राले लक्ष्यमा पुर्याउन्न ।
(अगाडि होइन, पछाडि हात राख्ने बानी परेको नेपाली मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक कार्टुन)
Posted by RD Kulung at 2:19 AM
सभापोखरीको धारावाहिक संस्मरण श्रृङ्खला लेख्दै थिएँ। सामाजिक सन्जालको वालमा एउटा समाचार आयो। समाचारले मेरो हृदय पुलकित बनायो । समाचारमा लेखिएको थियो-"भोजपुरकी मिरा रार्इको बाटोमा सङ्खुवासभाकी सिर्जना।"
समाचार (सायद ?) उर्लाबारीतिरबाट संम्प्रेषित थियो । खुशी यस कारण थिएँ कि सिर्जना सङ्खुवासभाकी प्रतिभा हुन्। समाचारमा थप लेखिएको थियो- "सिर्जनाले ७ किमीको दुरी ३४ मिनटमा पार गरिन्। उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी उनीभन्दा पाँच मिनेट ढिलो गरी लक्ष्यमा आइपुगेका थिए।" अझै खुशी लाग्यो किन कि उनी खाँदबारीमा मेरो घर सामुन्ने डेरा गरेर बस्छिन् । उनको घर म भर्खर दर्शन गरी फिरेको सभापोखरी गाउँपालिका ज्यामिरे हरेलोमा पर्छ। यो मेरो गाउँ चिचिला गाउँपालिका-१ को साँधमा छ।
हुन त म सभापोखरीबाट आउँदा त्यहाँको पाती प्रसाद सर्वप्रथम यिनैलाइ दिएर भनेको थिएँ- "सधै दाैडमा प्रथम हुनू। "उनले पनि हस् सर ! भनेकी थिइन् । उसो त योभन्दा पहिले पनि उनले धेरै दाैडमा भाग लिएर सधैजसो प्रथम र दुर्इचोटी मात्र दोस्रो स्थान हाँसिल गरेको इतिहास छ । सुनाैला तक्माहरू र रङ्गिन प्रमाण पत्रहरू यिनका सम्पत्ति हुन्। किसान भएर पनि भरलाग्दो खेतबारी छैन यिनका बाबाको । हिमालय मावि खाँदबारीमा कक्षा १२ मा पढ्ने सिर्जनासँग ११ मा पढ्ने एउटा भाइ पनि सँगै बस्छ । घरमा अरू दुर्इदिदी बहिनी र एउटा भाइ छ भन्छिन् । मैले ख्याल गरेसम्म कहिल्यै नरम चामल र रसिलो सब्जी पाक्दैन यिनका डेरामा।
जनज्योति मावि धुपूमा कक्षा नाै (९)मा पढ्दा भएकाे राष्ट्रपति रनिङशिल्डमा भाग लिएर यिनी दाैडमा प्रथम भएपछि सिर्जनाको खेल करियर शुरू भएकाे हाे । हरेक प्रतियोगितामा आफैँ ऋण खोजेर सहभागी हुन जान्छिन् र पुरस्कार जितेर तिर्छिन। कतिपय टाढाका र ठुला प्रतियोगितामा खर्च नपाएर जानै नपाउने यिनकाे बाध्यता छ । बल्ल एकपटक जिल्ला खेलकुद बिकास समिति(जिखेस) सङ्खुवासभाले आधिकारिक सहभागिता जनउँदा पनि यातायात खर्च मैले दिएर पठाएको थिएँ। जिखेसका सभापति भरतकुमार घिमिरेले निकै महत्वपूर्ण आयोजनाहरू र सहभागिता गरेर जिल्लालार्इ खेलकुद मार्फत चिनाएका छन्। उनको ध्यान पनि भलिबल,फुटबलजस्ता ठुला खेलतिर मात्र गए जस्तो छ।
गाउँबाट उदाएका यस्तो बेजोड एथलेटिक्स र दाैडका एकल प्रतिभालाइ समय समयमा २/४ हजार खर्च दिएर सहभागितामा पठाउने नीति रहे जस्तो बुझिएन। प्रतिभा संरक्षण योजनाको त कुरै भएन । यस किसिमका ब्यबस्था भए गाउँ कुनाका खेल प्रतिभा दुइ/चार हजारकै अभावले कुन्ठित हुनु पर्ने थिएन कि?
प्रत्ये दिन विहान लभिङ हिल-भेडेटार-लभिङ हिल करिब ७ किमी भाइहरूसँगै दाैडेर स्किपिङ र योगा लगायत जिम्न्याष्टिक गरेपछि शुरूहुन्छ सिर्जनाको दैनिकी। क्याम्पस जानु, कम्प्युटर क्लास जानु, खाना पकाउनु, राति दशबजेसम्म पढ्नु यिनको दैनिकी छ। हप्तामा एकपटक हरेलो पुगेर घरबाट खाने सामग्री ल्याउने काम गर्छिन। ताल परे डेराबाट हिडेको चार घन्टामा घर पुगेर डेरा आइपुग्छिन् । अचम्म जान नै पाँच घण्टा लाग्छ मलार्इ त । मासु सायद तीन महिनामा एकचोटी खाँन्छन्। कहिले स्कुस, कहिले गुन्द्रूकमा नुनपानी हालेर तिहुन् खान्छन्।
दुध, फुल, घिउ, गेडागुडी त गरिबको छोराछोरी भागमा पर्ने योजना नेपालमा कुन सरकारले पो ल्यायो र पर्छ ? अझ सिर्जना हप्तामा कैयौँ छाक भोकै बस्छन्। म मेरो स्कुले जीवन सम्झन्छु। त्यस्तै थियो मेरो पनि। टुलुटुलु हेरेर त बस्दिन तर कति पो हुन्छ र अरूको दयाले ? मैले प्रतिभाको फुल नओइलाओस भनेर खाने तरिका सिकाएको छु। अलि सुधारेका छन् खान्कीमा। एउटा खेलाडीले स्टामिनाको लागि न्युनतम जति खानु पर्छ, त्यसको दशमा दुइ भाग हुँदो हो, यो गुण र मात्रा।
त्यसैले त विरामी पनि हुन्छिन् सिर्जना। पेट दुख्छ रे उनको । अन्तरमुखी अल्पभाषी छन् । सुनाउन चहान्नन् अन्तरवेदना अरूलार्इ । भाइले सुनाउँछ । खाद्य तत्व कम र मेहनत बढी भएर नै दुख्छ होला। भर्खरै पनि उनी विरामी थिइन्। ऋण खोजेर गइछन् दाैडमा भाग लिन। प्रथम भइछन् । मैले धुपु स्कुलका शिक्षक साथी कुलबहादुर भट्टरार्इलार्इ पनि सुनाएँ- "सभापोखरीकी शान : हाम्रो स्कुलको उत्पादन,जनज्योतिकी स्वाभिमान!' भन्नु भो।
विचरा शिक्षकको पेशै यस्तो । सिप सिकाउने अनि पछि गर्व गरेर बाँच्ने। अरू शिक्षकले के नै पो गर्न सक्छ र ! हातमा पावर होस् न, टुपीमा टावर होस् ! कम्तिमा शिक्षकै भए नि म त लेख्न सक्छु लेखि पो दिनुपर्यो भनेर लेख्या। पत्रकार भए त कतै छापिन्थ्यो कि । कुनै प्रिय पत्रकारले छापे त हुन्थ्यो। नाम पो फेरि आफ्नै हाले भने बित्यो। पिरैपिर यो माष्टरलार्इ ।
अँ म भन्दै थिएँ। सभापोखरीको शान भनेर। त्यसै हो भने गाउँपालिका स्थानीय सरकार हुन्। पोखरी, पार्क, बाचनालय, पुस्तकालय, खेल मैदान, रङ्गशाला, संग्राहलय, मन्दिर, पाटी, मावि शिक्षक, खेलकुद, खेलाडी, कला, साहित्य, भाषा जस्ता कुराको निर्माण, संरक्षण सम्बर्धन, प्रबर्धन त स्थानीय तहकाे जिम्मेवारी भित्र पर्छ नि। डोजरले पहाड भत्काएर धुलो उडाउँदै ठाउँ ठाउँमा पहिरो गए नि जान्छ भनेर बाटो खन्नु मात्र बिकास होइन भन्ने जनप्रतिनिधिले बुझ्न पर्छ। सक्षम जनशक्ति उत्पादन गरेर उपयोगमा ल्याएमात्र दिगो विकास हुन्छ। सिर्जना रार्इ खेल क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति हो। सिर्जना रार्इहरू जस्ताको निर्माणमा अब लगानी गर्नु पर्दैन । बस् संरक्षण, उपयोग र अवसर दिए पुग्छ। बर्षमा एक डेडलाख खेल प्रतिभा संरक्षण र सहभागितामा छुट्याए पुग्छ।
सिर्जनाले अवसर र माया दिए सभापोखरीलार्इ महिला धावकको भूमि भनेर छिट्टै चनाउन सक्छिन्। संसारमा प्रतिभा लगानीबाट मात्र जन्मिने कुरा होइन। र्इश्वरीय बरदान पनि हो। सिर्जनाले प्रशिक्षण पनि दिन सक्छिन् । प्रतिभाहरू प्रतिमाको भोका मात्र हुदैनन् समयमै पहिचान गरेर सहयोग र संरक्षण गराैँ । जसरी खेम गुरूङको जिल्ला भनेर चिनिन्छ नि ! त्यसरी नै नेपाललार्इ सिर्जनाको देश भनेर चिन्नेछ संसारले। उचित खानपान र प्रशिक्षण पाउने हो भने ओलम्पिक ट्रयाकमा नेपाली झण्डा बोकेर सिर्जना रार्इ कुदेको देख्ने दिन पनि आउन सक्छ।
सिर्जना रार्इ सभापोखरीको छोरी भएर यो संसारमा कुद्नकै लागि जन्मिएकी हुन् । मेरो त मूल्याङ्कन गरेर आँखा देखाइ दिने काम न हो । गर्ने रत्न सुब्बा दाइ, शेरधन दाइ र केपीबाहरूले हो। बुझ्नु नि...
(हिमालय मावि, खाँदबारीका शिक्षक तथा साहित्यकार ताराबहादुर बुढाथाेकीकाे टाइम लाइनबाट साभार गरि पाेष्ट गरिएकाे सम्पादित सामग्री । तस्विरहरू ः सिर्जना रार्इकाे फेसबुक)
Posted by RD Kulung at 1:35 AM
मेरो ब्लग 05/10 - 05/17 (1) 04/19 - 04/26 (1) 04/12 - 04/19 (1) 12/16 - 12/23 (1) 08/26 - 09/02 (2) 08/12 - 08/19 (1) 07/22 - 07/29 (1) 07/15 - 07/22 (1) 01/21 - 01/28 (1) 12/03 - 12/10 (1) 11/12 - 11/19 (1) 10/22 - 10/29 (1) 03/15 - 03/22 (2) 01/11 - 01/18 (2) 01/04 - 01/11 (2) 12/21 - 12/28 (1) 12/14 - 12/21 (2) 12/07 - 12/14 (1) 08/24 - 08/31 (1) 06/22 - 06/29 (1) 06/08 - 06/15 (2) 01/26 - 02/02 (1) 12/29 - 01/05 (1) 10/27 - 11/03 (1) 08/11 - 08/18 (1) 08/04 - 08/11 (2) 07/28 - 08/04 (1) 06/30 - 07/07 (2) 04/28 - 05/05 (1) 04/14 - 04/21 (2) 03/31 - 04/07 (1) 03/24 - 03/31 (1) 03/17 - 03/24 (2) 03/03 - 03/10 (2) 02/24 - 03/03 (2) 02/17 - 02/24 (2) 02/10 - 02/17 (2) 02/03 - 02/10 (4) 01/27 - 02/03 (1) 01/20 - 01/27 (1) 01/13 - 01/20 (5) 01/06 - 01/13 (5)